Gaadiidka TCDD Inc. iyo Sarkaalka Maamulka ee Maamulka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSarkaalka Gaadiidka-Sen iyo TCDD Gaadiidka Guddiga Maareynta Hay'adaha
30 / 04 / 2018 06 Ankara, GUUD, HAY'ADAHA, TURKEY, Gaadiidka TCDD
Kulankii ugu horreeyey ee guddiga maamulka ee 2018 waxaa lagu qabtay Sarkaalka Gaadiidka-Sen iyo Hey'adda Guud ee TCDD Transportation Inc.
Maareeyaha Guud ee TCDD Cetin Altun ayaa guddoomiyay kulanka, oo matalayay Sarkaalka Gaadiidka-Sen Can Cankesen, Madaxweyne Ku-Xigeen Ibraahim Uslu, Kenan Çalışkan, Mehmet Yıldırım iyo madaxa TCDD. Maqaalka 14 ayaa looga hadlay kulanka.
TCDD TRANSPORT INC. XIRIIRKA BOOLISKA 2018 / 1
1 - Engineer, Tiknoolaji, Tababaraha iyo Shaqaalaha Taliyayaasha Farsamada ee ka shaqeeya siminaarada dayactirka gaadiidka; bixinta magdhowga dhulka ee shaqada ee beerta bannaanka bannaan ee bannaanka goobaha ka baxsan aqoon-is-weydaarsiga.
(Waaxda Xisaabinta iyo Maaliyadda)
2 - Xalalka dhibaatooyinka gaadiidka ee macalimiinta ku yaal bakhaarada cusub ee YHT ee Eryamanda,
(Waaxda Adeegyada Taageerada)
3 - Bilowga cuntada gargaarka ah ee ka midka ah heshiiska shaqada
4 - Bixinta amniga shaqaalaha ee xoojinta si looga hortago daciifinta amniga, gaar ahaan saldhigyada hoos yimaada shaqaalaha loo xilsaaray, iyo magacaabidda saraakiisha ammaanka da'doodu tahay 45 si ay u noqoto magaca saraakiisha.
(Waaxda Adeegyada iyo Adeegyada Taageerada)
5 - Furitaanka gaadiidka elektaroonigga ah, iyadoo tixgelinaysa codsiyada gaadiidka shaqaalaha ee ururka oo dhan.
6 - Kormeeraha Adeegga Wagon, Kormeeraha Sare ee Kormeeraha Wareegga ee heerarka oo dhan, sida beddelaadaha bedelida agaasimaha iyo agaasimayaasha,
In la tirtiro yaraanta shaqaale firfircoon oo ka mid ah shahaadooyinka sida 7-Wagon Technician, Sarkaalka Saadka, Sarkaalka Ururka Tababarka,
8 - Horumarinta iyo isbeddelka xeerka u degsan sida ugu dhakhsaha badan, furitaanka imtixaanka,
9- Koorso heer sare ah ayaa la furay si loo hubiyo ka qaybgalka Machadyada iyo Wagashiyeyaasha Wagashaqada.
(Waaxda Shaqaalaha iyo Waaxda Daryeelka Gawaarida)
10 - Xawaaladaha haddii ay dhacdo in lamaanaha la fuliyo si waafaqsan shuruudaha guud ee xeerka shaqada iyo dib u dejinta, ka fogaanshaha dhibanaha shaqaalaha iyo ka-hortagga wax-qabadka sharciga ah.
11 - Socodka socodka iyada oo aan xaddidneyn shaqo. tirada shaqaalaha firfircoon ee isbeddelaya sida waafaqsan sharciga. tus Inkasta oo 207 loo yaqaan N 2 Wagon Technician waxay la kulmeysaa tareenada xamuulka ee xawaaraha, 3. Waxaa jira meelo tareenada xamuulka ah ay la kulmaan shaqaale hal shaqaale ah oo gobolka ka mid ah. Sarayköy waxaa la siin karaa tusaale ahaan.
(Waaxda Daryeelka Gawaarida)
12- 3. Waxaa jira dhibaatooyin la xidhiidha goobaha lagu dhawaaqayo ee xarumaha Anatolian ee gobolka. Sababo la xiriira cabashooyinka rakaabka, shaqaalaha ayaa lagu qasbay.
Ku dhibaatee dhibaatooyinka qaboojinta ee tareenada.
13-32744-45 tirada gawaarida ee ka shaqeyneysa Dekedda Gayda Söke kuma haboona xaaladaha juqraafi ee gobolka iyo halkii DMN ANADOLU oo la dhigay 3 (oo leh qaboojiyaha).
(Waaxda Gaadiidka Rakaabka iyo Waaxda Daryeelka Gawaarida)
14 - Tababarayaasha Wagon waxaa la siiyaa dhididka jiilaalka sida kiisaska farsamada.
Arrimaha ay kicinayaan guddiga maamulka TCDD